Liverpool Oo Kalsooni Ku Qabto Saxiixa Calvin Ramsay
HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo kalsooni ku qabto saxiixa Calvin Ramsay
May 1, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay kalsooni ku qabto fursada ay ku heli karto daafaca dambeedka midig ee Aberdeen Calvin Ramsay xagaagan.
18-sano jirkaan ayaa iska dhigay inuu yahay ciyaaryahan muhiim u ah kooxda ka ciyaarta horyaalka Scotland xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay hal gool islamarkaana sameeyay sagaal kale 32 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Horumarka Ramsay ayaan ka warqabin kooxaha ka dhisan Premier League, iyadoo Liverpool, Manchester United , Tottenham Hotspur iyo Leicester City dhamaantood la saadaalinayo inay la soo wareegaan da’yarta.
Haatan, The Sun ayaa sheegeysa in kooxda Jurgen Klopp ay diyaar u yihiin inay ku guuleystaan ​​tartanka Ramsay.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in isku dayga Leeds United ay ku dooneyso inay ku afduubato Ramsay ay noqon doonto mid guul dareysata, Liverpool ayaana bixin doonta 3 milyan ginni si ay u hesho adeegiisa.